Waligaa Ha Iska Sii Deyn Gabadha, Haddii Ay Leedahay Tilmaamahaan - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Waligaa Ha Iska Sii Deyn Gabadha, Haddii Ay Leedahay Tilmaamahaan
Aayaha editor Send an email February 28, 2020
Haddii aad tahay nin nasiib leh, waxaad heleysaa haweeney aad jeceshahay oo leh, astaamahan hoos ku xusan.
1. Haddii ay naxariis leedahay oo ay eegto ama il gaar ah ku fiiriso baahiyahaaga ka nin ahaan, waa inaadan iska sii deynin gabadhaas. Haweeney ku daryeesho si lamid ah siday isku daryeesho, kaagana fakarto si lamid ah siday iskaga fakarto waa boqorad ay adagtahay in la helo.
2. Waa inaadan iska sii deynin haddii aysan bedelin shaqsiyadeeda isla markaana aysan iska dhigin qof kale.
3. Nin kasta wuxuu u baahanyahay haweeney macno iyo jiho u keenta noloshiisa. Sidaa darted haddii ay garab kugu siiso shaqadaada iyo hammigaaga waa inaadan iska deynin.
4. Quruxda waxaa lagu arkaa indhaha. Haddii aad u aragto haweeneyda ugu quruxda badan caalamka, waa inaadan iska deynin.
5. Anaga dhan ayaa sameyna qaladaad waana muhiim inaad ka nin ahaan leedahay haweeney leh daacadnimo ku filan si ay kuugu sheegto markaad qaldantahay.
Haddii aad heshay haweeney daacad kuu ah, waligaa ha iska sii deyn.
6. Haddii aad heysato haweeney aanan dulqaad badneyn laakiin cafis badan, waa inaadan waligaa iska sii deyn. Cafiska waa aasaaska xiriirka.
7. Haddii aad heysato haweeney kugu dhiiri gelisa inaad nin wanaagsan noqotid, ha iska sii deynin. Waad is hagaajineysaa markaad heysato haweeney culeys ku saarto.
8. Haddii aad leedahay haweeney firfircoon oo xiiso ay leedahay la joogeeda, ha iska sii deynin. Mararka qaar nolosha waxay noqotaa mid caajis ah oo aanan xiiso lahayn, sidaa darted heysashada haweeney noocaan ah waxay nolosha ka dhigtaa mid xiiso leh.
9. Haddii ay kuu jeceshahay si daacad ah oo kal iyo laab ah, waa inaadan iska sii deynin. Haweeney si daacad ah kuu jecel waxaa hubaal ah inay si dhab ah kuugu hureyso nafteeda adiga. Haweeneyda noocaan ah waa hanti waana inaad waligaa ilaashataa.
10. Haddii aad leedahay haweeney rajo wanaagsan ka leh nolosha kadib waa inaad ilaashataa. Dadka xun waa sun sidaa darted waa inaad xaaskaaga uga mahadcelisaa rajadeeda wanaagsan.
Haweenka Oo Raadiya Kana Hela Ragga Leh Siffooyinkaan Cajiibka Ah
Jacaylkii Ka Bilaawday Facebook Ee Ku Dhammaaday Dilkii Arxan Darrada Ahaa
UGAAR AH DUMARKA: 5 Tilmaamood oo ku tusaya in ninka aad xiriirka la leedahay uu qalbiga kaa jabi doono
3 Waxyaabood oo kaa dhigi kara inaad lama huraan u noqoto Ninkaaga